उगादी २०२०: १० विशेष मिठाईहरू बनानेका विधिहरू जुन तपाईंले घरमै चलाउनु पर्दछ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - कुक्री
Ugadi 2020: 10 विशेष मिठाई रेसिपीहरू जुन तपाईंले घरमा प्रयास गर्नु पर्छ
खेलकुद न्यूजील्याण्ड क्रिकेट पुरस्कार: विलियमसनले चौथो पटक सर रिचर्ड हेडली पदक जिते
अटोमोबाईलहरू कबीरा मोबिलिटी हर्मिस High 75 उच्च गति वाणिज्यिक डेलिभरी इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतमा सुरू भयो
समाचार अमेरिकी प्रशिक्षकहरूले भारतीय शिक्षकहरूको लागि अंग्रेजी पाठ्यक्रमहरूको नेतृत्व गर्छन्
घर कुकरी मीठो दाँत भारतीय मिठाइ भारतीय स्वीट्स ओआई-संकिता चौधरी द्वारा संचिता चौधरी | अपडेट गरिएको: बुधबार, मार्च ११, २०२०, १:23:२:23 [IST]
उगादीले कर्नाटक र आन्ध्र प्रदेशका जनताका लागि नयाँ वर्षको सुरूवात गर्दछ। जब यो नयाँ सुरुवातको कुरा आउँछ, हाम्रो देशमा मिठोसँग कुनै नयाँ कुरा सुरू गर्ने परम्परा हो। त्यसकारण हामी उगादीको मेनूबाट मिठाईहरू गुमाउन सक्दैनौं। २०२० मा, उत्सव २ 25 मार्चमा मनाइनेछ।
यस वर्ष बोल्डस्कीले शीर्ष १० मीठो रेसिपीको सूची कम्पाइल गर्यो जुन यगदीमा प्रयास गर्नै पर्दछ। यहाँ सूचीबद्ध गरिएका उगादी रेसिपीहरू आन्ध्र र कर्नाटक दुबै व्यंजनहरू हुन्। र उल्लेख गर्न मिल्दैन, यी सबै मीठा रेसिपीहरूले समान रूपले आश्चर्यजनक स्वाद लिन्छन्। Payasams वा kheers को विविधता, माउथवाटरिंग मैसूर पाक, अनौंठो obbattu र अन्य धेरै स्वादिष्ट पदार्थहरू हाम्रो मुखमा पानी बनाउन पर्याप्त छ।
3 दिनमा कसरी निष्पक्ष हुने
UGADI का संस्कृति र सम्वादहरू
त्यसोभए, किन पर्ख? हामी युगदीका लागि यी शीर्ष १० मिठाईका व्यञ्जनहरू जाँचौं र मिठो नोटमा वर्ष सुरु गरौं!
नरिवल पूरन पोली
ग्रेटेड नरिवल गुड़को साथ मिसिन्छ र स्टफिंग पूरान पोलीमा थपिन्छ। नरिवल पूरन पोलीको यो प्रामाणिक स्वादले उगादीको लागि स्वादिष्ट मिठो खाना बनाउँदछ।
मुंग दाल पायसम
मुong्ग दाल पायासम उगादीको लागि मीठो डिश तयार गर्नुपर्दछ। यो मिठो पकवान मुंग दाल र मितिहरू द्वारा बनाईन्छ।
कसरी अनुहारमा फ्याट पाउने
यस मीठोको लागि मैसूर पाक रेसिपी शुद्ध घीले बनेको हो जसले यस रमाईलो मिठोको सुन्दर र स्वादको स्वाद थप गर्दछ।
ओब्ब्ट्टु एक प्रसिद्ध उगादी मिठाई हो। भारतीय डेजर्ट रेसिपीहरू एकदम सरल र तयार गर्न सजिलो छ। ओब्ब्ट्टु एउटा गुड़को थाल हो, मिठाई धेरै उच्च क्यालोरीको हुँदैन। भारतीय डेजर्ट रेसिपीहरू फ्याटेनिंगको रूपमा परिचित छन्, तर यो थाल पोष्ट गरिएको छ, त्यसैले तपाईं अधिक वजन नदिनुहोस्।
पायासम यो महत्त्वपूर्ण दिनलाई मनाउन सब भन्दा मनपर्ने मिठाई हो। तपाईं चामल, सेवई वा एभल (पिटेको चामल) को साथ payasam बनाउन सक्नुहुन्छ।
Boorelu Ugadi को लागी एक स्वादिष्ट मिठो पकवान हो। यो बंगाल चना, गुड़ वा चिनी र नरिवलको साथ बनाईन्छ। मिठाईका व्यंजनहरूसँग उत्सवको मौसमको आनन्द लिन बोरूलु नुस्खा जाँच गर्नुहोस्।
पायासम एक परम्परागत दक्षिण भारतीय मिठो पकवान हो जुन दुधले बनेको हुन्छ। यो उत्तरी भारतको खीरसँग मिल्दोजुल्दो छ। Semiya (vermicelli) payasam एक सजिलो मिठो पकवान हो जुन minutes० मिनेट भित्र तयार गर्न सकिन्छ।
एरिसेलु एक लोकप्रिय मीठो पकाउने विधि हो जुन उगादीमा कर्नाटक र आन्ध्र प्रदेशको राज्यहरूमा तयार गरिन्छ। यो मिठो पकवान दक्षिण भारतको विभिन्न भागहरूमा काजजया, अथिरासम आदि जस्ता धेरै अन्य नामहरूले चिनिन्छ। यो स्वादिष्ट मीठो पकाउने चामलको पिठो र गुड़को साथ तयार पारिन्छ।
एक खलनायक सेतो पहिरनमा श्रद्धा कपूर
यो मूल रूपमा payasam वा खीर को लागी एक दक्षिण भारतीय नुस्खा हो। Pesarapappu Payasam मुंग दाल बाट बनेको छ र यसैले तयारी पछि एक पहेलो रंग छ।
सुख्खा फल केसरी
सुख्खा फल केसरी एक विशेष मीठो पकवान हो जुन रावा (गहुँको उत्पादन) वा चामल र केसर (केसर) द्वारा बनाईन्छ। केसरी भट्ट भनेर पनि चिनिन्छ, तपाईले यो थाल कर्नाटकमा प्रशस्त फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
भगवान कृष्णको छोराको नाम
बच्चाहरूमा जंक फूडको हानिकारक प्रभावहरू
बिहान बिहान महको साथ आंवलाको रस
पीरियड्समा के खान हुँदैन
प्यारा तो होना थाई पूर्ण चलचित्र
कसरी हातमा ट्यान कम गर्ने